Ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe, ndị na-ebunye - ndị na-emepụta igwe kwụ otu ebe China
Aluminom Wheel Kids igwe kwụ otu ebe
Igwe igwe kwụ otu ebe a dị obere, ọ nwekwara ike ijikwa mmegbu niile onye na-agba ọhụrụ na-etinye na ya. Ọ ga-enyere obere nwa gị aka isi na steepụ nwata gaa n'ọgbọ agha na-agafe agbataobi. Oche oche na-agbatị ogo afọ ruo afọ 5 ka nwa gị nwee ike ịnya ya ogologo oge.
Ngwongwo ụlọ ọrụ, Wheel Foam, igwe kwụ otu ebe ụmụaka
Mgbanwe oche dị mfe: enwere ike idozi oche ahụ site na 42-52cm. Enweghị ngwaọrụ achọrọ; dị nnọọ tụgharịa sere na igbachi. T-bar nwere njide dị nro dị mfe maka obere aka ijide mgbe. Na eserese na imewe na-eme ka ọ bụrụ igwe kwụ otu ebe mara mma. Tha kemeghi oche na handlebar na-ekwe ka ọ na-eto na gị nwa ewu.
Titanium magnesium alloy, Foam Wheel, 2 wiil
Aha ika: Xuxiang
Nọmba nlereanya: XXB-010
Ogo wheel: 12 inch
Frame Material: Titanium magnesium alloy
Ihe ndụdụ: ígwè
Ihe eji eme ihe: igwe/aluminom,
Taya: taya ikuku
Net arọ: 5.0kg
Nnukwu arọ: 6.0kg
Agba: Red, Blue, Sliver, Champagne,
12 inch, Wheel Foam, igwe kwụ otu ebe ụmụaka, ire ere ọkụ
Nọmba nlereanya: XXB-009
Ihe Frame: Steel
Ihe eji eme ihe: PP,
Taya: ụfụfụ Taya
Agba: Red, Blue, Orange
Igwe ọkụ, wiil ụfụfụ, igwe kwụ otu ebe ụmụaka nwere ọkụ
Nọmba nlereanya: XXB-008
Ogo wheel: 10 inch
Agba: Red, Blue, Purple, Orange
Ahịa na-ekpo ọkụ, Wheel Foam, igwe kwụ otu ebe ụmụaka
Kedu ihe kpatara anyị ji chọọ igwe kwụ otu ebe maka nwa ewu?
Mee ka obi sie gị ike na ịmụta ịnya igwe kwụ otu ebe
Nhazi n'efu na-enyere nwatakịrị aka idowe ụkwụ nke ọma n'ala maka mmetụta nke nchekwa
oche kwesịrị ekwesị maka ụmụaka 2.5 ruo 5 afọ
Onye nrụpụta China, Wheel Foam, igwe kwụ otu ebe ụmụaka
Nọmba nlereanya: XXB-007
Ihe eji eme ihe: Aluminom,
Agba: Red, White, Black, Blue, Orange
“ọnụahịa ụlọ ọrụ, Wheel Foam, igwe kwụ otu ebe ụmụaka
Ọ bụrụ na ị na-achọ igwe kwụ otu ebe dị fechaa, ihe nlereanya a bụ nke ziri ezi! Taya ụfụfụ 12 ″ na-enweghị ikuku na-enye gị njide zuru oke ma ịgaghị ebugharị ha ọzọ. Frare dị fechaa nke nwere nnukwu tubing wuru site na plastik agbasiri ike, na-eme ka ịnya nwa gị na-agba ọsọ dị mfe.
“7 inch”, ezigbo mma, Foam Wheel, igwe kwụ otu ebe ụmụaka
Ihe nlereanya a zuru oke maka ịkụziri obere gị ka ị na-agba ịnyịnya na nguzozi. Obere taya na freema dị arọ na-enye nwa gị ohere ịnya ịnya ụgbọ ala ebe ụmụnne ya nwoke na ụmụnna nwanyị na-eji igwe ọgbara ọhụrụ na-agba. Yabụ were ụlọ a wee mee obere nwa gị obi ụtọ!
Wheel Foam, igwe kwụ otu ebe ụmụaka nwere bọọdụ ụkwụ
Nọmba nlereanya: XXB-004
Taya: Taya ụfụfụ
Agba: Red, Pink, Blue, White,
Ụgbọ mmiri na-edozi ụmụaka nwere akwa akpụkpọ anụ ojii na-enweghị breeki
Nọmba nlereanya: XXB-003
Ihe eji eme ihe: Aluminium,
Agba: Red, Pink, White, Blue,
2021 igwe kwụ otu ebe ụmụaka n'ogbe, nwere bọọdụ ụkwụ
Igwe nchara nchara na-eru naanị 3.0kg. Ọ dị mfe nke na nwata ọ na-enwe ike ijikwa ya ma ọ dịgidere nke ọma iji nagide mmegbu ha. Taya ụfụfụ na-adịghị larịị nwere ike idi nsogbu ụmụaka. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ dịghị mgbe ị ga-achọ idozi ụlọ dị larịị.